Madaafiic lagu garaacay Saldhig ciidamo Ajnabi ah ku sugan yihiin
MUQDISHO, Soomaaliya - Xoogaga Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerar Madaafiic ay ku beegsadeen Saldhig ay ciidamadda Kenya ee qeybta ka ah AMISOM ay ku leeyihiin deegaanka Fax-faxdhuun ee gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya.
Wararka ayaa waxay intaas ay ku darayaan in Hoobiyaasha qaarkood ay ku dhaceen gudaha Xeradda la weeraray, islamarkaana uu jiro khasaaro dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay.
Dadka deegaanka oo siyaabo kala duwan ula hadlay Warisdaha Garowe Online, waxay tilmaameen inay maqleen ugu yaraan Lix madfac iyo Qaraxyo, kuwaasoo dhawaqooda uu aad u cuslaa.
Saraakiisha ciidamadda xooga dalka Soomaaliya oo falkaan u xaqiijiyay warbaahinta waxay sheegeen inuu jiro burbur baahsan oo ay sababeen Madaafiicda lagu asqeeyay Saldhiga ciidanka Kenya ee AMISOM ka tirsan.
Shabaab ma aysan carabaabin khasaaraha nafeed, ee ka dhashay weerarka Madaafiicda ah, inkastoo ay daboolka ka qaadeen inuu jiro khasaaro uu geystay weerarka Hoobiye-yaasha ah.
Taliska AMISOM, iyo midka ciidamada Kenya wali war kama aysan soo saarin dhankooda weerarka beegsaday Xerada ay ku leeyihiin Tuuladda Fax-faxdhuun ee gobolka Gedo.
Tuuladda Fax-faxdhuun oo ku dhow magaaladda Ceel-waaq ee xuduudka Kenya iyo Soomaaliya, ayaa waxaa xaaladeeda laga soo sheegayaan inay tahay mid degan, wallow dadka deegaanka hadalhayaan.
Sikastaba, Weerarka Hoobiye-yaasha ah ayaa kamid ah xeeladaha dagaal oo ay adeegsato Al-Shabaab marka ay howlgal fulinayaan, waxaana ka dhasha Khasaaro dhimasho iyo dhaawac.
Dadka degaanka ayaa sheegay inay maqleen rasaas culus oo labada dhinac is dhaafsanaya.
Go'doominta Kismaayo oo holac kusii shiday xiisada Soomaaliya-Kenya
Soomaliya 08.10.2019. 09:10
Cabdi Xaashi oo warbixin siiyay Guddiga joogtada Aqalka Sare
Soomaliya 25.12.2018. 16:26
Jubbaland oo Ciidamo gaar ah loo tababarayo [Akhri sababta]
Soomaliya 23.05.2018. 13:06
Kenya oo bilowday inay Ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya
Caalamka 19.05.2018. 10:01
Farmaajo oo loogu baaqay in uu booqdo ciidamo la weeraray 20.02.2020. 07:13
Laba Soomaali ah oo ku dhaawacmay dagaal ka dhacay waddanka Malta 20.02.2020. 07:00
Duqeyn cirka ah oo lala beegsaday Al-Shabaab oo laga warbixiyey 20.02.2020. 06:50